musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Maitiro Ekutora Yako Degree seDhijitari Nomad
Kufamba nenyika, kushanda kubva palaptop yako, uye kuwana degree rako kunogona kuitirwa zvakati wandei pane zvaunofunga.
Iyo dhijitari nomad tsika yakonzera kurota mumamirioni emoyo yevanhu kuti vabvise iyo chinzvimbo quo nekuveza yavo yega nzira muhupenyu.
Zvichida iwe unoda kudzidzisa Chirungu muChina kana bhasikiti pasi pezuva muBali.
Chero kwaungave uchienda kurota, haufanire kusarudza pakati pekufamba nekuvaka basa. Muchokwadi, izvo zviviri zvinogona kugarisana zviri nyore mukuwirirana uye kunyange kukubatsira iwe kuti uwane mararamiro ako zviri nyore.
Kana iwe uchifarira kudzidza maitiro ekuita dhijitari nomad ndiri kuchikoro, verenga.
Sarudza Degree Ine Mikana muRemote Work
Kana iwe uchida kuve wedhijitari nomad, saka iwe unofanirwa kusarudza yakakura iyo inokupa iwe inochinjika mikana yemabasa. Panzvimbo pekutora munda unokusungira pasi kune basa rehofisi kwemakore makumi mana anotevera, funga nezvema digital-based maindasitiri. Iwe unogona kupinda muchirongwa, webhu dhizaini, kushambadzira kwedigital kana kunyora. Unogona kutowana degree rako redzidzo kuti uwedzere magwaro ekudzidzisa Chirungu kunze kwenyika.
Kune akawanda anochinjika epamhepo zvirongwa izvo zvinokubatsira iwe kugara muchikoro iwe uchifamba. Iwe unogona kunyorera ye chikwereti chevadzidzi vega kuwana mari yechikoro uye zvimwe zvinoshandiswa. Chikamu chakanakisa nezvezvikwereti zvakavanzika ndezvekuti iwe une rusununguko rwakawanda mukushandisa kwaunoita mari yaunokwereta. Kune mamwezve maripo ekuronga mikana iwe aunogona kutora mukana nawo mushure mekupedza kudzidza.
Iwe unofanirwa kuchengeta tsoka dzako pasi sezvo fungidziro dzako dzekugara kunze kwenyika dzichitiza. Hupenyu kumhiri kwemakungwa hunogona kunge hwakaoma, uye kune akawanda matambudziko ezuva nezuva aunofanirwa kukunda semutorwa. Kubva pamipinyi yemitauro kumitengo yekushandurwa kwemari, pane zvinhu zvakawanda zvauchazofanira kuita pamusoro pebasa uye nechikoro. Iwe uchafanirwa kuzadzikisa vhiza zvinodikanwa zvekufamba kwako kwekushanyira futi. Nzira iri nyore yekupinda munyika zhinji ndeye mudzidzi kana vhiza yebasa. Izvi zvinogona kuve kuburikidza nekudzidzisa Chirungu, kuve unove vaviri kana kusainira zvidzidzo pachikoro chemutauro iwe uchinge wawana yako koreji dzidzo online.
Unogona kuda kufamba wakasununguka uye kugara chero kupi hupenyu kwaunokutora, asi izvo zvinongogona kukuendesa iwe kusvika ikozvino. Unogona kuve nerusununguko rwakawanda sedhijitari, asi iwe uchiri kudikanwa kuve nezvinangwa zvemberi zveremangwana rako. Chimwe chezvikonzero zvikuru ndechekuti mushure mekutanga kutenderera kunotanga kupera, unozviwana wave kusuwa kumba kana kunzwa kusava negwara. Pasina kuziva kwaunoda kuenda, zvingave zvakaoma kugara wakachengeteka mune zvemari.
Mavisa anopera, uye mumwe munhu anoda kugara munyika dzakawanda anofanirwa kushandisa nguva munyika mavo pakati pemavisa. Uchagara kupi muchinguva? Chii chauchaita kana iwe uchida kuisa pasi midzi? Unoziva here kuchengetedza imba yako paunenge uchifamba? Ndicho chinangwa chako chekupedzisira chekuwana ugari kune imwe nyika kana kudzoka kumba nguva nenguva pakati pekufamba? Sezvauri kuona, izvi zvinoda kuronga zvine hungwaru zvisinei kuti unoenda kupi kana zvaunodzidza.